ONG Fanahy maha olona Hikarakara fotoam-pivavahana iraisam-pinoana
Ny sabotsy 21 martsa izao dia hisy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izay ho karakarain’ny ONG Fanahy maha olona etsy Antsahamanitra manoloana ny fiparitahan’ny areti-mandringana Coronavirus eto ambonin’ny tany.
notarihin’ny filoha sy ny biraon'ny Mpiandraikitra Foibe FJKM ho fitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2020 sy ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany ary ny asa fanompoany. Lohahevitra noraisina ny hafatra tao amin’ny Josoa 4:24 hoe : “Mba ho fantatry ny firenena rehetra fa mahery ny tanan’i Jehovah”. Nikatona daholo, araka izany, ireo fiangonana teto Antananarivo sy ny manodidina fa dia tetsy amin’ny Coliseum avokoa no nifampizara aim-panahy. Ambohipihaonan’ny mpino omaly teny an-toerana na somary ratsy aza ny toetry ny andro. Mandehana amin'ny fitiavana, miorena amin'ny finoana, miasà amin'ny fahazotoana, mifotora amin'ny asan'ny Tompo, mahatsiarova ny mandrakizay,… hoy ny hafatra avy amin’ny filohan’ny FJKM ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi. Nanomboka omaly ihany koa dia niova ny fitantanana ny FFKM na ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara ka ny filohan’ny FLM ny Pasitora Rakotonirina David no hitantana amin’ity taona 2020 ity, raha ny filohan’ny FJKM no nitantana teo aloha. Ny zoma 24 janoary izao dia hisy ihany koa ny fotoam-pivavahana lehibe hatao eny Anatirova hanasana ny mpino rehetra, izay fanombohana ny fankalazana ny faha-150 taonan’ny Kolejy teolojika, izay fanofanana mpitandrina eo anivon’ny FJKM.